Cupid's Arrow (BROMANCE STORY) - DiasAnOrdinariBOY - Wattpad
Cupid's Arrow (BROMANCE STORY)
7.9K Reads 419 Votes 17 Part Story
By diasanordinariboy Ongoing - Updated Jul 08, 2017
Sinadya ng mapaglarong si Kupido na panain ang puso ng gwapong si Kenjie para mainlove ito sa sikat na artistang si Phillip at doon naganap ang "stole kiss"  na nagpagulo sa isip ng dalawa kung bakit nangyari. At naging dahilan para mabuo ang cute na lovestory ng dalawang pogi. Yes, it'sabromance story! :) Handa ka na bang kiligin?
jodeyzjedoyz Sep 27, 2016
Cge na kuya, di mo naman matanggihan si cy dahil love mo xa.
Get notified when Cupid's Arrow (BROMANCE STORY) is updated
5.7K 1.5K 292
နဉ်ရှောင်ယောင်မှာ zombie virus များပျံ့နှံ့နေသော ကမ္ဘာပျက်မှ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲနေသည့် စစ်တပ်ဆေးအရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သည်။ တစ်နေ့ သူမ ရှေးခေတ် ဘုရင်အဖြစ်နှင့် အတိတ်ကာလသို့ အချိန်ခရီးသွား၍ရောက်သွားသောအခါ....
သူမသည် မိန်းကလေးဖြစ်လျက် ယောက်ျားလေးဟန်ဆောင်ကာ သူမမောင်လေးအစား နန်းတက်ခဲ့ရသည်။ သူမ၏ မယ်တော်တစ်ဖြစ်လဲ နောင်တွင် သူမအား သတ်မည့်သူ၏ ချုပ်ကိုင်မှုအောက်မှ သူမလွတ်မြောက်နိုင်မည်လား....
နဉ်ရှောင်ယောင် သေမည့်ဘေးကို ကြိုသိလျက် သူမမိသားစုဝင်တို့၏ အကောက်ကြံမှု၊ နန်းတွင်းရေးရာအရှုပ်အထွေးများအကြား ရှင်သန်နိုင်ပါ့မလား....
သို့သော် Super စွမ်းရည်များနှင့် zombie နှိမ်နင်းရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်သူ နဉ်ရှောင်ယောင်တစ်ယောက် နန်းတွင်းညီလာခံနှင့် နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်များအား အဘယ်မှာ နားလည်နိုင်မည်နည်း....
"တစ်ခုမှ အလုပ်မဖြစ်ရင်လည်း... ငါ သူတို့ကို ရ
Një "magji" për dashurinë
1.4K 437 1.2K
- Mos ndoshta nuk je mirë? -epyeti ai gjasmë serioz. - Të ka bërë keq ëmbëlsira? Po të duash mund të të çoj në spital.
Bëri të vendoste njërën dorë në ballinesaj si të donte të kuptonte në qoftë se ajo kishte temperaturë, por Kristeni bëri një hap mbrapa.
- Mos më prek. Jam alergjike ndaj sheqerit.
Ai ngriti përsëri njërën vetull, ndërsa ajo po mundohej të perceptonte edhe njëherë se çfarë dreq budallallëku kishte thënë.
Mos ndoshta sapo i kishte thënë sheqer?...
Nisur më: 22 Mars 2018
Përfunduar më: ...
დიდი ცხრიანი || BIG NINE ✓
3.1K 411 95
EXO FANFICTION: დასრულებულია
Highiest rank #5 in Humor  31.03.2018 and
#9 in thriller 28.05.2018
აიდოლები?!... არა, უფრო ფარული სპეც-რაზმელები.
ორმაგი ცხოვრება მათი გამოგონილია. საყვარელი აიდოლებიდან სისხლისმსმელ  "ს.უ.ს"-ამდე. თუმცა ეს მათთვის ჩვეული ცხოვრებაა.  მათ კორეელი ხალხი იცნობს როგორც ლეგენდარულ EXO-ს, ხოლო საერთაშორისო აგენტურა, - როგორც "დიდი ცხრიანი"
30.03.18 #401 in Humor
¿Boyfriend or Friend?
10.7K 743 15
Atracción: solo quieres estar con el abrazandolo, mirándolo y cuidandolo
Amor: es cuando sientes una chispa en el corazón, los latidos aumentan y las mariposas en el estómago revolotean.
Que les puedo decir sobre mi, bueno, yo tenia un novio llamado Tayron, el me pidió matrimonio y pues le dije si y justo el día antes de la boda lo vi besándose sin fin con mi prima asi que supongo que saben lo que paso, la boda se cancelo, termine con Tayron, me mudeaNew York con mi hermano mayor, conseguí un trabajo de modelo y en pocos meses ya era conocida mundial mente. Yo esperaba enamorarme de un modelo sexy y gracioso pero entonces paso lo que menos me esperaba, me sentí atraida por un desconocido, el mejor desconocido.
Pero no queremos nada serio
Ambos nos cuidamos
Pero somos nada
Ambos nos besamos
Pero no se si el es mi novio o amigo?
F.C.G - fucking crazy girls
1K 133 229
ფიკი მოგვითხრობს3ერთმანეთისაგან განსხვავებული გოგოს ისტორიას, რომლებიც გადანგრეული გიჟები არიან და ერთმანეთი სიგიჟემდე უყვართ.
ကျန်းရွှမ်တစ်ယောက် ကျင့်ကြံခြင်းလောကတစ်ခုကိုရောက်သွားရာကနေ သူ့ကိုယ်သူ ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုရောက်နေကြောင်းတွေ့လိုက်ရတယ်။ ကျင့်ကြံခြင်းဆိုတာတောင် ဘာမှန်းမသိတဲ့ကျန်းရွှမ်တစ်ယောက် အမှိုက်လိုဆရာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အသက်ရှင်နိုင်ပါ့မလား။ အတိတ်ဆိုးတွေရဲ့အရိပ်ကနေ ရုန်းထွက်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ...
ဆရာတပည့်တွေကြားက ကြည်နူးစရာသံယောဇဉ်လေးတွေအပြင် ကျန်းရွှမ်တစ်ယောက် အလွဲလေးတွေကနေ ရီစရာဟာသလေးတွေပါတွေ့ရမှာပါ။
My Sexy Boy 20+
191K 6.8K 270
စွာကိုဦးစီးလုပ်​ကိူင်​​နေတဲ့ Park chanyeol
ရန်​ Barမှာ အလုပ်​လုပ်​ကာ အချိန်​ပိုင်းအလုပ်​မှန်​
သမျှကိုလဲ မနားတမ်းလုပ်​​နေတဲ့ လူငယ်​​လေး
​တွေ့ဆုံမိ​သောအခါ baekhyun အတွက်​........
[MM translation] 233ရက်ကြာကာလ ဟမ်းစတားအဖြစ်ြ...
3.3K 1.2K 270
ဒါလေးက ဟာသ BL လေးတစ်ပုဒ်ပါနော်။
Rebornကို လူအဖြစ်မဟုတ်ပဲ ဟမ်းစတားလေး တစ်ကောင်အဖြစ်မြင်ရမယ့် ထူးထူးဆန်းဆန်း reborn storyလေး ပါ။
English Trans ကိုလည်း wattpadမှာ ဖတ်လို့ရပါပြီ။
#credit to all